Mahazoa tsiky tonga lafatra amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Cmahazo tsiky tonga lafatra miaraka Adobe Photoshop dia zavatra azontsika atao haingana sy mora jerena amin'ny antsika tena nify fotsy toy ny vao nivoaka ny mpitsabo nify. Ity dia fomba tsara hanitsiana ny tsikitsiky ataontsika amin'ny sary na hanatsarana ny tsikin'ny hafa amin'ireo seha-tsary rehetra ataontsika.
Fotsy ny nify Photoshop hahafahantsika hianatra koa a teknika retouching sary fototra Amin'ity programa ity dia azonao atao ny manitsy ireo singa hafa amin'ny sary toy ny lokon'ny hoditra, ny mason'ny masonao na ny akanjo avy eo. Ny teknika dia mitovy foana Mila mampihatra azy amin'ny fomba samihafa fotsiny isika, mitady izay mety hahasoa antsika.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika amin'ity retouch ity dia ny fananana a sarin'ny tsiky izay ahitanao ny nify, ny idealy dia ataovy ny vokany amin'ny nify malefaka Mba hahitana tsara kokoa ny vokany fa amin'ny tranga tsy fananana sary hahafahantsika mampiasa izay ananantsika eny am-pelatanana.
Ao amin'io lahatsoratra mianatra mampiasa ity manaraka ity izahay fitaovana:
Manokatra ny sarinay izahay amin'ny Photoshop y averinay ny sosona lehibe.
Raha vantany vao manana ny sarintsika isika, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia manaova fifantina nify, noho izany dia afaka mampiasa fitaovana fifantina isika, amin'ity tranga ity dia hampiasa a sarontava haingana.
Tsindrio ny safidy maska ​​haingana ary mamorona nifidy nify izahay toy ny borosy mahazatra. Io fitaovana io dia mamela antsika mandoko faritra ary avy eo mamorona safidy, amin'ity tranga ity dia hanao ny fifantenana amin'ny borososy amin'ny hamafin'endrika kely hialana amin'ny fanaovana ny vokany ho tsikaritra loatra eo amin'ny sisin'ny safidy.
Ataontsika tsikelikely ny fifantenana nify miaraka amin'ny sarontava haingana manao izay azo antoka hisafidianana azy rehetra nefa tsy mamela ampahany amintsika. Aorian'ny fanaovana ny fifantenana dia ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia tsindrio indray ilay kisary maska ​​hainganaAmin'ny fanaovana izany dia hamorona safidin'ny zavatra rehetra izay ivelan'ny safidintsika isika. Mifarana avadika ny safidintsika amin'ny fividianana vola.
Aorian'ny fanaovana ny fifantenana dia hamorona a haavon'ny sosona Mba hahafotsy ny nifintsika, mamela antsika ity sosona fanitsiana ity hampitombo ny fotsy sy ny mainty amin'ny fomba iray izay ahazoana famirapiratana lehibe kokoa amin'ny tsiky, dia retouch azo ampiharina amin'ny singa maro amin'ny sary iray.
Tao anatin'ny minitra vitsy monja dia nahavita isika omeo fiainana ny tsikinay miaraka amin'ny fanampian'ny Photoshop mampiasa fitaovana izay afaka manampy antsika amin'ny famerenanana sary maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Mahazoa tsiky tonga lafatra amin'ny Adobe Photoshop
Mamitaha mankany "mandeha"